Home Wararka Khilaafka Guudlawe & Dabageed oo meel xun gaaray
Khilaafka Guudlawe & Dabageed oo meel xun gaaray
Ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu soo kala dhex galay khilaaf culus oo salka ku haaya qaabka loo maamulayo doorashada 11 kursi oo taala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wararaka la helaayo ayaa intaasi ku daraya in khilaafka Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Dabageed uu ka dhashay is faham waa la xariira hab maamulka doorashada 11-ka kursi oo horay jadwalkooda loo shaaciyay, islamarkaana Maanta lagu waday in la diiwaan geliyo Musharaxiinta ku tartameysa kuraastaasi oo dib u dhac ku yimid.
Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa la sheegayaa inuu doonayo in kuraasta harsan ee Baledweyne taala doorashadooda la furo, halka Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed uu isna doonayo in kuraasta harsan qaarkood in loo xiro musharaxiin gaar ah.
Waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in khilaafka labada masuul soo kala dhex galay inuu sameyn ku yeeshay guddiga doorashada Hirshabeelle oo la sheegay iney la kala safteen Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay haatan sheegayaan in hoolka doorashada ay xirteen ciidamo daacad u ah Yuusuf Dabageed.
11-ka kursi ee sababay khilaafka xoogan ee soo kala dhexgalay madaxda ugu sareysa Hirshabeelle ayaa ah kuraas ay ku fadhiyaan shaqsiyaad miisaan sare ku leh siyaasadda Soomaaliya, kuwaas oo waqtigaan ciidamo farabadan ku dhex haysta gudaha magaalada Baledweyne.
Khilaafka labadaan masuul ayaa noqon kara mid saameyn adag ku yeelan kara dhameystirka doorashada kuraasta Golaha Shacabka Baarlamaanka 11 ee dalka, xili mudada loo qabtay dhameystirka doorashada ay ka harsan tahay sideed maalmood oo kaliya.
Jamaal Cali Cabdi,
Previous article[Akhriso] Hirshabelle oo soo hormarisay Doorashada 3 ka mida Kuraasta ku harsan Beledweyne
Next articleShirkad kamida shirkaha hoos yimaada DP world oo lagu wareejiyay dekeda Boosaaso
MW Saciid Deni iyo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad oo kulan...
Puntland oo u hambalyaysay Madaxweyne Axmad Madoobe